Jadwalka doorashooyinka oo mar kale fashilmay | KEYDMEDIA ONLINE
Kaliya Maamul goboleedka Jubbaland ayaa ilaa hadda ku dhawaaqay, inuu diyaar u yahay qabashada doorashada Aqalka sare oo xilliggii loogu talagalay in la billaabo ay naga xigto hal caana-maal oo kaliya.
MUQGDISHO, Soomaaliya – In kastoo shax doorasho oo ay soo saareen Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federal (GDHF), 16-kii bishaan, lagu sheegay inuu yahay Jadwalka ugu danbeeya ee doorashooyinka, kaas oo ilaalin doona shaxda hishiiskii 29 Juun, iyo habraacyaddii 17 Sebtember iyo 27 May, hayeeshee, sida ay fahansantahay Keydmedia Online waxaa mar kale loo baahan doonaa jadwal Doorasho oo hor leh.
Sida ku cad qodobka 2aad ee jadwalka soo baxay todobo maalin ka hor, 17-ka ilaa 23-ka bishaan, ayuu qorshuhu ahaa in Madaxweynayaasha Maamullada ay guddiga u gudbiyaan liiska musharixiinta Aqalka sare, halka 25-ka ilaa 28-ka loo madlay qabsoomidda doorashada Aqalka Senate-ka.
In kastoo dhamaan habraacyada doorashooyinka ay u muuqdeeen kuwo aan xilliga iyo duruufaha la is waafajin, hadana ilaa hadda guddiga doorashooyinka dadban sooma bandhigin Madaxweyne maamul oo soo gudbiyay musharixiinta Aqalka Sare oo ugu danbeyn maanta la sugayay.
Baarlamaanka Maamulka Galmudug, oo laga sugayo in ay soo saaraan xubnaha Aqalka sare, ayaa fasax ku jira, degaannada waxaa ka socda dagaal kharaar oo ka holcaya Koofurta Gobolka Mudug, halka Madaxweynaha Maamulkaas, Qoorqoor, uu qeyb ka yahay hoggaanka howlganka ka dhanka ah kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab.
Sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan Baarlamaanka Galmudug, ma muuqato filsho ay doorashada Aqalka sare, maalin kadib uga billaaban karto Dhuusamareeb.
Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle, dhankiisa wuxuu ku jiraa fasax, waxayna intoodaba ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, sido kale Madaxweynaha Maamulkaas, Guud-laawe, oo dhawaan ku soo laabtay dalka ayaa xarun ka dhigtay Caasimadda, mana jiraan ifafaalo lagu filan karo in doorashada Aqalka sare ay 25-ka bishaan ka billaan karto Jowhar.
Baarlamaanka Maamulka Puntland, waxaa dhawaan hareeyay buuq, kadib markii sabab la xariirta doorashada Aqalka sare, uu guddoonka Baarlamaanka wax uga badalay xeer hoosaadka Golaha, taas oo dhalisay xasarad ka dhex qaraxday Madaxtooyada iyo Guddoonka Aqalka, Madaxweynaha Maamulkaas, ayaa shalay dib ugu laabtay Garowe, kadib markii uu safarro qarsoon ugu maqnaa dalka dibaddiisa.
Maamulka Koofur galbeed, oo hoggaankiisu si weyn ugu daaban yahay, Kooxda Farmaajo, ayaa dhankooda la filayaa in qabashada doorashada ay dib ugu dhigaan sababo siyaasadeed oo ay gadaal ka riixeyso Villa Soomaaliya, taas oo u jeedkeedu yahay qorshe ka dhan ah Madaxweynaha maamulka KG dariska la ah ee Jubbaland.
Si guud, KON, waxa ay fahan-santahay, in Farmaajo wali ku lug leeyahay doorashoyinka, masuulna ka yahay dib u dhacaan iyo diyaar-garow, la’aanta Maamuladda uu hoggaanka uga dhigay madaxda maqaar saarka ah ee hore uga midka ahaa taliskiisa.
Ujeedka ugu weyn ee loo fashilinayo habraacyada doorashooyinka, ayay ilo loo qaateen ah no sheegeen in Farmaajo, doonayo in Axmed Madoobe, ay ka idlaato mudadii labada sano ahayd ee Madaxtooyadu siisay labo sano ka hor, taas oo ay maamlo qara ka dhiman yihiin, inkastoo Madoobe, hore ugu gacan sayray warkii ka soo baxay Villa Soomaaliya.